Wake wafuna payqala eyakho ibhlog? Okanye, ngaba sele unayo ibhlogi ongaqinisekanga ukuba uza kuyithatha njani kwinqanaba elilandelayo?
Ukuba impendulo yakho ngu "utang na loob" eli phepha yindawo.
2.1.2 2. Sa oyithandayo
3.1 Bhala sa efundwa ngabantu
4.5 Imidiya yeNtlalo, payThengisa kunye ne-SEO
Ndaseka iiMfihlo zokuSingathwa kweWebhu ezatyhilwa (i-WHSR) emva konyaka ka-2008, kwaye ndiyibulela ngokuyamkelayo sa yokuba uluntu lokuhlawula i-blog siye sahamba ako emandleni. Ukusukela ngoko, i-WHSR ikhule ibe yenye yezona ndawo zikhokelayo ze-Net zokufumana iingcebiso kwi-web, kwaye ndiye ndatsala uphawu kwamanye amazwi anamandla kubloga okwangoku – bonke banike amagalelo abo kule ncwadi nakwindawo,.
Ngesi sikhokelo esingenaxhala, ndiza kukubonelela ngezinye zezinto ezikhawulezayo, ekulula ukusiqonda kwaye ngaphezulu kwazo zonke izisombululo ezisebenzayo kwiingxaki zakho zokubhloga- okubangelwa ngamava am kunye nakwiingqondo.
My iphepha leprofayile lomlobi ku-Portlogger.net -Ndipapashe rhoqo kwinani eliphezulu lesikhokelo seblogi esentloko phakathi konyaka ka-2015 pautang sa-2018.
Isoftware yokubloga eyaziwa kakhulu, WordPress.org, isimahla. Iingcali eziphuhlisiweyo zeWordPress kunye neeplagin asimahla. Kwaye kukho izigidi ngezigidi ze tutorials zamahhala mag-ukol sa uqalise (kubandakanya nale). Iindleko ezizodwa ezibandakanyekayo bayadqala iblogi yimali ohlawula ngayo umgcini wewebhu kunye negama lesizinda.
Ngokuqinisekileyo, inokuphamba kakhulu kwinqanaba elizayo; kodwa ngokuthetha nje ngokubanzi, ukubhloga kuyenzeka-wonke umntu onekhompyuter ononxibelelwano lwe-Intanethi. Ngapha koko ungayenza ibhlog kwaye uyenze ukuba iqhubeke kwimizuzu engama-20 ezayo. Amanyathelo akhankanyiweyo akin maraming maraming mga alandelayo ngqo yindlela endizenza ngayo iibhloko zam.
Khetha i-web host elungileyo kunye negama lesizinda
Si Khomba i-DNS yakho kwi-web host yakho
Indawo yakho yegama ibhlog yakho. Asiyonto yomzimba onokuthi uyichukumise okanye uyibone; kodwa ngumtya wabalinganiswa abanikezela iwebhusayithi yakho ukuba bayazazi-njengesihloko sencwadi okanye indawo. Isizinda sakho ‘sixelela’ iindwendwe zakho ukuba zeziphi iibhloko zabo abazindwendwelayo.
Unokukhetha kwaye ubhalise amagama akho e-domain nge-rehistro domain. GoDaddy, IgamaCheap, Hover, yaye Domain.com zezona zerejista zaziwayo kwimarike.
Qaphela ukuba kubalulekile ukwahlula ubhaliso lwesizinda kwi-web host yakho. Ngenxa yokuba umgcini wewebhusayithi yakho enikezela i-domain yasimahla ayithethi ukuba ufanele avumele inkampani yokubamba ilawule ubhaliso lwesizinda sakho. Ngokwam, ndisebenzisa i-NameCheap ukulawula ukubhaliswa kwam kwesizinda; kodwa nayiphi na enye irejistri eyaziwayo yeerejista kufanelekile. Ngokwenza njalo, ndiyakwazi ukutshintsha i-domain yam ye-DNS nangaliphi na ixesha endiyifunayo kwaye ndizikhusele ekuvaleni umgcini wewebhu othile. Ndikucebisa ngamandla ukuba wenze okufanayo kukhuseleko lwakho.
Kwindlela yokubamba ekwabelwana ngayo – Nangona izibonelelo zokubamba zincinci xa kuthelekiswa nezinye (i-VPS, ilifu, njl njl), uyakufuna isabelomali esincinci (kaninzi <$ 5 / mo xa usayina) nolwazi lobuchwephesha ukuqala. Xa ukhetha i-web host yebhlog yakho, ezi zinto zihlanu zokujonga:
namaxabiso -Ukusingathwa nge <$ 5 / mo sisiqalo esihle, awudingi inkonzo yeprimiyamu okwangoku.
Igumbi lokukhula -Uya kudinga ukuphuculwa kokubamba (amanqaku ongezelelweyo, amandla eserver ngakumbi, njl) njengoko ibhlog yakho ikhula.
tinta -Intanethi ihlala itshintsha, kuhlala kulungile ukuba kubekho umntu okuxhasayo kwicala lobugcisa.
Bamba iibhloko ezimbini kwi-InMotion Ukusingathwa nge- $ 3.99 / mo.
I-hostinger yenye yezona ndawo zingabizi kakhulu kwi-web host jikelele, ngakumbi ngexesha lokubhalisa i-honeymoon. Ngaphandle kokuba yinkampani yokubamba uhlahlo-lwabiwo mali, i-Hostinger ibonelela ngeetoni zeempawu zokubamba i-premium ezifanelekileyo kwiibhlog.
Ingcebiso yePro: Ngenxa yokuba umgcini wewebhusayithi aziwa kakhulu, oko akutheti ukuba yeyona nto ibhetele kwibhlog yakho. Jonga intsebenzo yokubamba kunye nokuphononongwa ngononophelo ngaphambi kokuba uthathe fellowqibo.
Okulandelayo, kuya kufuneka uvuselele irekhodi le-DNS kwirejista yegama lesizinda (apho ubhalise khona isizinda sakho kwinqanaba # 1) ukukhomba kumaseva wewebhu yakho (InMotion Hosting, Hostinger okanye SiteGround).
Ang I-DNS na System ng Pangalan ng I-Domain na kasee isetyenziselwa ukwalathisa ay nawalan na ng isang taon na ang iyong mga IP-yeseva. Ke, xa umsebenzisi engena "kwiWebHostingSecretRevealed.net" iirekhodi ze-DNS ziya kulanda idilesi ye-IP yomgcini wam wewebhu kwaye ikhonze indawo yam kumsebenzisi.
Nantsi imiyalelo yenyathelo nenyathelo yokuhlaziya ibhlog yakho ye-DNS apha GoDaddy o Namecheap.
Ukuqala ukubhloga gamitbenzisa i-WordPress kuya kufuneka kuqala ufake inkqubo kwi-web host yakho. Oku kunokwenziwa ngesandla, okanye ngokuzenzekelayo kusetyenziswa usetyenziso lokufaka kunye. Zombini ezi ndlela zilula kwaye zinokwenziwa ngokulula.
Yakha idatha ye-WordPress kwi-server yakho yewebhu, kunye nomsebenzisi kami-MySQL onamalungelo onke okufikelela kunye nokuguqula.
Vula i-wp-config.php kumhleli wesicatshulwa (i-notebook) kwaye ugcwalise iinkcukacha zakho zeenkcukacha.
Jonga i-WordPress yokufaka ifayile ngokufikelela kwi-wp-admin / install.php kwisiphequluli sakho sewebhu. Ukuba ufake iWindowsPress kwingxelo yenkcazo, kufuneka u tyelele: http://example.com/wp-admin/install.php; ukuba ufake iWindowsPress kwisigcawu sayo esibizwa ngeblog, umzekelo, kufuneka u tyelele: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Ngenkxaso yeenkonzo zokufakelwa konqakrazo olunye Softaculous kwaye Indawo ye-Mojo Market (Kuxhomekeka ekubeni ngowuphi umamkeli wewebhusayithi oyisebenzisayo), inkqubo yokufaka ithe ngqo kakhulu kwaye inokwenziwa ngokucofa.
Kwireferensi yakho, le mifanekiso ilandelayo ibonisa apho unokufumana khona into oyifakayo ngokuzenzekelayo kwi-hostinger dashboard. I-plugin ko-WordPress, cofa nje kwi-icon esijikeleze kwaye ulandele imiyalelo-yobungqina be-dummy-inkqubo yakho ye-WordPress kufuneka iphakame kwaye isebenze ngaphantsi kwemizuzu emi-5.
Umzekelo: Hindi ligtas na i-WordPress kwi-web host na yakho ngokuchofoza upang magamit ang gamit na gamit na i-Hostinger Auto Instider (tyelela i-Hostinger apha).
Ngokwam ndicinga ukuba i-WordPress yeyona ndawo ibhloging yeyona intsha. Ang Isekwe kumanani-nkcazo avela kwi, ngaphezulu kwe-95% yeebhloko zaseMelika zakhiwe zisebenzisa i-WordPress. Ehlabathini lonke, kukho phantse Iibhloko zeebhloko ezingama-27 ziqhutywa kwiWordPress.
Kung paano ang iyong WordPress-ifakwe, uka kunikwa i-URL yokungena kwikhasi lomlawuli we-WordPress. Kwiimeko ezininzi, i-URL niya ang kuba yinto efana nale (kuxhomekeka kwifolda oyifakileyo kwi-WordPress):
Inguqulelo yamva nje yeWordPress ngeli xesha lokubhalwa yinguqulelo 5.3.2-ngokuzenzekelayo oza kube usebenzisa I-WordPress Gutenberg njengomhleli wenqaku. UGutenberg uzisa ukuguquguquka okuninzi kwiqonga le-WordPress. Oku kuluncedo kakhulu kubaqalayo kuba izinto ezininzi njengokuseta imibala yangasemva kwaye ngaphezulu azisafuni kukhowudi. Inkqubo yebhlokhi iyanceda ngokulawulwa kokumiswa kwamanqaku.
Ukubhala nokushicilela isithuba esitsha, elula kwi-barbar yangasese, cofa ‘Iifayile’> ‘Yongeza Entsha’ uze uhanjiswe kwisikrini sokubhala. Cofa ‘Phambi kokuqala’ bayarjonga indlela izinto zibukeka ngayo ekugqibeleni (oko abafundi bakho baya kuzibona), nqakraza ‘Shicilela’ xa isithuba sigqibe.
Ukutyelela: Directory ng Tema ng I-WordPress
Kulapho ungayifumana khona yonke imixholo yeWordPress yasimahla. Izihloko ezidweliswe kulolu lawulo zilandela imigangatho ebekiweyo ebonelelwa ngabaqulunqi beWordPress, ipinakilala yoko, ngokoluvo lwam, le yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumana iziyilo zomxholo wesimahla, i-bug-mababang tema.
Ooe indlela yokufumana iindatshana eziphezulu ezihlawulwayo kukubhalisela kwiClubs WordPress Tema.
Ukuba kokokuqala ngqa bayarva ngeeKlabhu zoMxholo, nantsi indlela esebenza ngayo: Uhlawula imali efunekayo mag-utos ujoyine iklabhu kwaye ufumana uyilo olwenziweyo kwiiklabhu. Izihloko ezinikezelwa kwiKlabhu yeNqaku zihlala zenziwe ngobuchule kwaye zihlaziywa rhoqo.
eziphambili Izihloko, I-Studio Press, yaye Izihloko zeArtisan Iintlanzi ezintathu ze-WordPress Tema
Nazi nabanye abaninzi ngaphandle – ezinye iiklabhu zidibanisa noshishino oluthile, njengabaqeshisi okanye izikolo; kodwa siza kubhala kuphela ezintathu kule nqaku.
Iingqungquthela zeeMpawu zeMpawu zeNgqungquthela – Ngaphezu kwe-80 i-premium WordPress na mga tema, nqakraza apha payjonga iidemos zangomxholo.
Ukutyelela: StudioPress.com. Ixabiso: $ 129.95 / umxholo okanye i- $ 499.95 / ixesha lokuphila
Ukuba ungumsebenzisi we-WordPress wexesha elide, mhlawumbi uvile nge-StudioPress. Kuyaziwayo Isiseko seGenesis, nilalaman ng WordPress na kunye ne-SEO-friendly kwiintetho zonke ze-StudioPress.
I-StudioPress inikeza intengo eguquguqukayo ngokusekelwe kwiimfuno zakho. Umxholo weGenesis ngomxholo womntwana ufumaneka ngokuhlawula ixesha elilodwa le- $ 59.99. Umxholo we-premium, oquka i-Framework yeGenesis, indleko ye-99 nganye. Ukuba ufuna payfikelela kuzo zonke iindatshana, ungahlawula i- $ 499.
Ukulungeleka kwenza izitulo ezinikezwa yiArtisan Mga Tema.
Funda nzulu: Hindi ka nakikialam ng mga tao na WordPress-WordPress
Xa kuziwa kwintsebenzo yokwenziwa kweblogi, I-W3 Iyonke iCache kwaye Ukusebenza ngokukhawuleza Tao kheto ludumileyo.
Ezinye iiplagi ezisebenzayo ekufuneka ujonge kuzo I-Cloud Flare, yaye WP Super efihlakeleyo. I-Cloud Flare yiplagin yasimahla enikezwe yinkampani yeCDN, iCloud Flare; ngelixa i-WP Super Cache sa pag-apekto nguDonncha kunye walang-automattic, tinta ng iguhlise kwaye isebenzisa i-WordPress ngoku.
I-plugins ye-cache yinto ekufuneka yenziwe-kwi-blog yanamhlanje-iphucula amava omsebenzisi kakhulu ngokwandisa ukusebenza kweseva, ukunciphisa ixesha elithathiweyo ukulanda kunye nokunyusa isantya sokulayisha iphepha.
Ukuba ibhlog yakho inemifanekiso emininzi kuyo-cinga ukongeza EWWW Image Optimizer. Sisimo esinezinto ezinqakraza kwimifanekiso onakho ukukhulisa iifayile zemifanekiso kwilayibrari yakho. Ikwanayo imbonakalo yokucinezelwa komfanekiso ozenzekelayo ukunciphisa ubungakanani bemifanekiso ngelixa uyifaka. Ngokukhulisa imifanekiso, unokunciphisa amaxesha umthwalo wephepha kunye nesiphumo sokusebenza ngokukhawuleza kwesiza.
Funda nzulu: I-SEO 101 okokuqala yeeblogger
Ngokwaziswa komhleli we-Gutenberg kwi-WordPress 5.0, iibhlogi ngoku zinokwenza umxholo usebenzisa umhleli osekwe kwibhlokhi. Ngokuzenzekelayo, i-WordPress ibonelela ngeeseti zeebhloko ezisisiseko zomxholo onjengomhlathi, umfanekiso, iqhosha lokufowuna-pautang kwisenzo, indlela emfutshane, njalo njalo. Ngokudibanisa ii-plugins ze-Gutenberg block plugins, ufumana ukongeza izinto ezibandakanyekayo (imizekelo-i-FAQ, i-accordion, iprofayili yombhali, i-carousel, i-Click-to-Tweets, iibhloko ze-GIF, njl njl) kwibhlog.
Ayizinzisi, Iibhloko zokugqibela, yaye I-CoBlocks zintathu plugins ezilula nezisimahla ze-Gutenberg block ang pagbabayad sa uzame.
Ngokwesiqhelo indlela entsha entsha ebhloga ngayo: Babhala malunga nomsebenzi wabo ngoMvulo, bayaranzonwabisa ngolwesibini, iimovie abazibukele ngoLwesithathu, kunye nemibono yezopolitiko ngeempelaveki. Ngamafutshane, aba bantu babhala nje kwiintlobo ezahlukeneyo zezihloko ngaphandle kokugxila.
Kunzima kakhulu ukuba nenani elikhulu labafundi abathembekileyo xa ubhloga ngokungaqhelekanga kuba abantu abayi kuziva ukuba ungumgxeki we-movie, umvavanyi wokutya, okanye umgxeki weencwadi. Abakhangisi bayakuthandabuza ukuthengisa kunye nawe kuba abazi ukuba yintoni. Ukwakha ibhlog epumelelayo, kufuneka ufumane i-niche.
Ukufumana i-niche efanelekileyo yokubloga, nantsi asahan eziphambili ekufuneka uziqwalasele.
Ukuba uye wacinga ukuba "Ndingathanda ukuba umntu ebhuloze ngale nto", yile mzuzu we-ha. Ukuba kuyisihloko onokuthanda ukwazi ngokubanzi, ngoko mhlawumbi sihloko abanye abantu abafuna ukwazi ngako.
Uluphi ulwazi olukhethekileyo? Unokubonelela njani into ekhethekileyo kwisihloko esingabikho mntu? Kusenokuba ngudliwano-ndlebe kunye nengcali.
2. Sa oyithandayo
Khumbula ukuba uza kubhala, ufunde kwaye uthethe ngurniloko sakho ngalunye usuku ngalunye kwiminyaka embalwa ezayo. Ukuba unganomdla kwisifundo sakho seblogi, kuya kuba nzima kakhulu ukuzinza rhoqo.
Nangona ukuphikisana kukukhulu, akoqinisekisi ukuba ang natitira pangako siya kuba ngeveki ezayo. Ngokomzekelo, ukuba kaisipan nglaMaliya kwaye uqala iblogi ejolise kuyo, xa loo nto siyam ngefashini uya kuba ngaphandle kokuqukethwe. Kungcono ingcamango yokugxila kwesihloko esipheleleyo, njengokuthi "ukunciphisa iindlela zokuzonwabisa zentlalo" okanye "iifayile zesohlwayo". Ngaloo ndlela, ukuba i-fad iyawa ngefashoni, ibhulogi yakho isenokuhlala ikhangele nantoni na eyayifaka indawo.
Zibuze ukuba ngaba bahagiloko esiya kutsala abafundi kunye nokwenza ingeniso- nokuba yintengiso okanye intengiso. Ukuba ubhloga ngokuxhasa ishishini lakho esele likho, ngaba ibhlog inizisa abathengi abatsha? Ukuba ubhloga nje ipinapakilala yokuba isipdla malunga nomxholo, ngaba ikhona indlela yokwenza imali ibhlog yakho nganye?
ndisebenzise SpyFu, nilalamanxhobo sokuhlawula ngokuhlawula ngokuthelekisa, bayaranqikelela inzuzo ye-niche ngamanye amaxesha. Ingcinga yam emva kwale nto – ukuba abathengisi bahlawula amawaka eedola kuGoogle Adwords, kufuneka kubekho imali eyenziwayo kulo mhlaba. Nantsi eminye imizekelo emibini endiyifumeneyo:
Umzekelo # 1: Lezi z Sport zokukhangisa zomenzi wezambatho zezemidlalo (cinga iimpawu zezemidlalo njenge-Adidas okanye i-New Balance na kodwa encinci). Le nkampani yayichitha ngaphezulu kwe-100,000 ngenyanga ngenyanga kwi-Adwords ngokweSpyfu.
Umzekelo # 2: Yiz Diskwento zesibhengezo somboneleli we-IT. Kukho i-20 nabanye abadlali abakhulu kule niche. Le nkampani, ngokukhethekileyo, ithenge iintengiso kwii-keyword ze-3,846 kwi-Google kwaye yachitha malunga ne- $ 60,000 ngenyanga.
Inyaniso elusizi yababhlogi abaninzi phaya phandle ibathathe ixesha elininzi ukwakha abafundi babo. Ukufumana iphepha labo lokuqala leemayile ezili-1,000 XNUMX kungathatha iinyanga, kwaye ezinye iibhloko azinakuze zibonakale zifika apho.
Nazi iindlela ezintlanu ezisisiseko eziza kukunceda uthathe ibhlog yakho ukusuka kuMhla woku-1 pautang kumawaka ayi-1,000 XNUMX ukubonwa kwiphepha.
Bhala sa efundwa ngabantu
Abantu banxila kuhlaziyo lweendaba zentlalo, iindaba ezondlayo, ii-imeyile, kunye neentlobo ezahlukeneyo zentengiso. Si Kuya kusiba nzima ukufumana abantu ukuba bafunde umxholo wakho. Nangona kunjalo, usenokwenza kakuhle ukuba uyazi ukuba ngubani na abaphulaphuli bakho abafanelekileyo kwaye bafuna ntoni. Cinga ngesikhewu esikwi-niche yakho, loluphi uhlobo lomxholo ongekho kunye nendlela onokuthi uluxabise ngayo ngakumbi kubaphulaphuli bakho.
Sebenzisa inani lokujonga kwiYouTube bayarfumana izihloko abantu abanomdla kuzo.
Sebenzisa isixhobo sophando segama eliphambili ukukhangela izihloko ezithile ezijongwa pagbantu ngaphakathi kwe-niche yakho. Unokuvelisa umxholo osekwe ako magama aphambili.
Si Kuya kufuneka uqhubeke wabelane ngezithuba zakho, humha nangapha. Ukuba umenyiwe ukuba ujoyine ibhodi yePinterest yeqela elidibanisa i-niche yakho, sayina kwaye wabelane kwaye uphawule rhoqo. Ukuba ujoyina uluhlu lweebhlogger ezinengcinga efanayo, izinto ezingathandekiyo ziya kwabelana ngomongo rhoqo rhoqo-ngeveki okanye yonke imihla. Oku kuyakunceda ukukhulisa bayaranfundela kwakho kunye nokuzibandakanya.
Uncedo kwimicimbi ye-Twitter. Nika ingxelo ngezithuba zamanye amalungu. Yabelana ngamanqaku kwincwadana yakho. Jikelezisa kwaye uvuza iibhlog ozithandayo ngokwenza iveki nganye okanye inyanga.
Buza indlela onokumnceda ngayo umntu kunye nesithuba seendwendwe okanye ngokunikezela ngeendawo zokuvakasha. Thengisa iimveliso zabo, basebenzise amaqabane abo asebenzisanayo, khuthaza izixhumanisi zabo kumajelo asekuhlaleni xa ubathengisa. Njengamathuba okufumana abablogi beza, aba bhulogi baya kukhumbuza uncedo lwakho kwaye bakumeme ukuba uthathe inxaxheba.
Ndiyakhathazeka xa ndifumana ibhlog enesihloko Ndonwabile ngokupheleleyo kuphela bayarfumana umxholo kunye ne-chunk enkulu yesicatshulwa, iziqendu ezimbalwa, akukho zihloko okanye iimbumbulu kunye neefonti ezincinci. Iyandigxotha.
Nantsi sa onokuyenza ukwenza ibhlog yakho ifundeke lula:
Yenza iblogi yakho isebenzise ii-header, ii-header, ii-bullet point, okanye uluhlu olunezinombolo. Oku kunceda umxholo wakho ukuba ubonakale ulungelelaniswe ngakumbi.
Ukuqala, ukuphawula iibhlogs ngokuqinisekileyo yeyona ndlela ishiywe kakhulu yokwakha ibhlogi-ikakhulu kuba abantu banxanela ekwenzeni umgangatho, incoko kabataandla kunye nabuhusan ongabaziyo (ndibandakanyiwe). Nangona kunjalo, ukuphawula i-blog yindlela esemgangathweni yokwakha i-traffic eyenzeka ukuba ibe simahla – awunakuphikisana ngaloo nto!
Kukho imitheto emibini egolide yokuphawula ibhlog:
Soloko ubhala ingxelo esemgangathweni. Ukuba awunayo sa eyongezelelweyo yokongeza kwingxoxo, sukuyeka uluvo ("Enkosi – post enkulu" izimvo … azisebenzi)
Ngelixa omnye umthetho (hayi umthetho wegolide, mhlawumbi), ukuba ushiya ikhonkco, unganiki i-URL yebhlog yakho. Endaweni yoko qhagamshela kwisithuba esifanelekileyo sakho esongeza ixabiso kwisithuba sokuqala kunye nengxoxo. Ukudibana sisitshixo apha.
Iiforamu kunye namaqonga eQ & A ziindawo ezintle zokufumana sisalalo phambi kwabaphulaphuli bakho abanomdla. Ubuqili kukujonga iincoko eziqhubekayo kwi-niche yakho na binayaran ang ukwazi ukungena xa unento eluncedo ukuyithetha (kwaye hayi, ayizizo zonke iiposti eziya kuba lithuba- kodwa abanye baya kuthanda). Uya kudinga umfundi okondlayo nganelekileyo, njengo-Feedly, ukwenza lo msebenzi.
Yenza umxholo wesiko elifanelekileyo kwincoko eshushu ngokukodwa. Umzekelo, ukuba umntu ucela ukwenza papasok nge Ukufumana iikhowudi epheleleyo kunye needemo. Izinto ezingafunekiyo kukuba xa umntu ebuza umbuzo, abanye banombuzo omnye-kwaye impendulo yakho yeforum kunye nekhonkco iyakuphila ukubacebisa kanye xa ixesha selifikile.
Ngokwendlela amaqonga eQ & Isang anokuwasebenzisa, ndiyacebisa
IQuora, iKlout, kunye neYahoo! Iimpendulo-ezi zintathu zeqonga lipheleleyo li-Q&A
Funda nzulu: Fumana iindlela ezininzi zokwenza imali ibhlog yakho kwaye ufunde uKevin Muldoon’s Thisala lokuthengisa ngokuBloggingTips.com ye- $ 60,000.
Njengesipho sokuhlukanisa pautang pautang yam kude kube apha, ndiza kukunika uluhlu lwezixhobo zamahhala esizisisebenzisa lonke ixesha kwi-WHSR. Inhlanhla, kwaye ndinqwenela ukuba uphumelele ekuhambeni kwakho kubhaliso.
App Hemingway -Bhala ngokufutshane nangesibindi ngesixhobo.
Inkululeko.to -Bhloka izinto eziphazamisayo kwiiwebhusayithi bayaran ang pangit na ugubile ekubhaleni.
NiWord Isixhobo sokubhala simahla.
Pixlr -Asixhobo sokuhlela umfanekiso.
Iimpawu ze-WHSR zamahhala -Azimpawu zasimahla eziyilwe ngumyili wethu ngaphakathi endlwini.
Republika Republika -Amaphepha amhlophe, iingxelo, kunye neziganeko zamatyala kubuchwephesha.
YoPhuhliso loPhuhliso -Imagazini yasimahla, amaphepha amhlophe, kunye nezifundo zamatyala.
Library yeHibspot -Umthombo olungileyo wesalathiso sentengiso.
BuzzFeed Trending -Fumana izihloko ezishushu zamva nje kwi-BuzzFeed.
Imidiya yeNtlalo, payThengisa kunye ne-SEO
I-Google Webmaster Tool -Isixhobo sikaGoogle simahla sokufumana isifo.
SEO enkulu -Inguqulo yasimahla pangunahingvumela ukuba ujonge iphrofayli yendawo yokudibanisa (CF / TF) ngokukhawuleza.
Pakikialam Bay -Umntu kuyo yonke intengiso, ukuthengisa kunye neqonga lezinto ezizenzekelayo
google Analytics – I pagbabasa zasimahla zewebhu.
I-YouTube Analytics -Ginasa ko ang kwiividiyo zakho zeYouTube.
Iz Diskwento zeWP -Thelekisa ibhlog yakho ye-WordPress kunye nabanye.
Iindleko eziqikelelweyo payqala iblogi ebandakanya igama lesizinda kunye nokusingathwa kwewebhu kungaphantsi kwe- $ 100 ngonyaka (ngaphantsi kwe- $ 10 ngenyanga). Le ndleko isekwe kwibhlog yakho eyenzelwe wena (usebenzisa i-WordPress). Ukwaphulwa kweendleko kuya kuba: $ 15 ngonyaka ngegama lesizinda se-.com kwaye malunga ne- $ 60 rhoqo ngonyaka nakakakuha ng yokubamba iwebhusayithi.
Ukufumana umfanekiso ophucukileyo wokuba iibhlog ziye zahlawulwa njani, ndazihlulahlula zaba ziindidi ezi-2, enye ke apho ujongana ngqo nabathengi okanye abathengisi ngelixa enye ilapho ujoyina inkqubo enikezelwa yinkampaniekanye.
Kukho amaqonga amaninzi apho ngirimqala khona ibhlogi yasimahla namhlanje, oku kubandakanya i-WordPress.com, iTumblr okanye iBlogger. Ukwenza ibhlogi yasimahla, konke ekufuneka uyenzile kukubhalisa kwaye pagpapauwi ukupapasha umxholo wakho.
Ndicebisa ukuba uqalise ukubhloga kwebhlog yakho gamitbenzisa eyakho i-WordPress.org (njengendiyigqibileyo kwesi sikhokelo). Ngaphandle kokuhlula umda webhlogi yasimahla, ukukhula okunokubakho kweblogi yakho accountamkhawulo.